Kungani uhamba noMhlinzeki Wensiza Wokufaka Isicelo? | Martech Zone
Kungani uhamba noMhlinzeki Wensiza Wokufaka Isicelo?
NgoMsombuluko, Februwari 4, 2008 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 5, i-2008 Douglas Karr
Kuyinselele ukukhuluma nenkampani enezinsizakusebenza ezinamandla ze-IT ubenze bathole imodeli ye-ASP. Iningi labantu likholelwa ukuthi umehluko phakathi kwe-ASP nenkampani yesoftware eyilifa nje ukuthi eyodwa ikhipha isoftware iklayenti elizoyiphatha nokunye okukhishwa online lapho uhlelo kulula ukugcinwa khona.
Uma ubheka le mboni ngale ndlela, bobabili babukeka njengezinkampani zesoftware. Lokho bekungeke kube kude neqiniso - kepha kunzima ukukuchaza lokho kuchwepheshe we-IT onolwazi ongathandi ukudedela ukulawula kunoma ngubani - ngaphandle kobuchwepheshe babo.
Izinkampani zesoftware zenza izixazululo zesoftware. Abahlinzeki Bensiza Yohlelo Lokusebenza bangabalingani bebhizinisi abasebenzisa izixazululo zesoftware. Umthengisi wesoftware angancika ekusekelweni kwesiphazamisi nezici ezintsha; lapho i-ASP ingancika ekuqondeni imboni, izitayela zayo, ukuphatha impumelelo nokukhula kwamakhasimende, nokuqhubeka nokukhipha ukukhishwa ngenkathi kugcinwa isikhathi sokuphumula esincane.
Ungaphutheli uhlelo olususelwa kuwebhu lwe-ASP, lokhu kuhluke kakhulu. I-Gmail uhlelo lokusebenza olususelwa kuwebhu. I-Google Office uhlelo lokusebenza olususelwa kuwebhu. Futhi ungahlinzeki nganoma iyiphi 'insizakalo' kumakhasimende ngaphandle kokusebenzisa isoftware. I-ASP ihlinzeka ngengqalasizinda, insizakalo, isoftware kanye nokweseka.
Ngokujabulisayo, othile ogama lakhe lingu-ASPs ngendlela efanele - Isicelo Izikhungo Umhlinzeki. Ama-ASP awaphelele kuyo yonke imboni noma kuzo zonke izinkinga zesoftware. Kunezinhlelo zokusebenza eziningi zesoftware ezisebenza kangcono kakhulu endaweni kunokuthunyelwa kuwebhu. Izicelo ezidinga inani eliphakeme ledatha elizohanjiswa phakathi kweklayenti neseva ziyisibonelo esisodwa - umkhawulokudonsa ungaba yibhodlela.
Abahlinzeki Bensizakalo Yokuhlinzeka bakunikeza abasebenzi abakhishelwe ngaphandle abangongoti embonini yabo. Ama-ASP abona ukuthi isoftware ihlangana kanjani kahle nemvelo yebhizinisi lakho futhi isiza ukushayela imiphumela yebhizinisi lakho usebenzisa isoftware.
Isibonelo se-ASP: Umhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili
Isibonelo esihle se-ASP yi- Umhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili. Inkampani, efana I-ExactTarget, ube nezinsizakusebenza ezinhle zomkhakha:
Amaqembu okulethwa asebenza nabahlinzeki bezinsizakalo ze-Inthanethi ukuqinisekisa ukuthi i-imeyili yakho ayikhonjwa ngendlela engeyiyo njengoGaxekile futhi ivimbela ukuthi ufakwe ohlwini lwabamnyama.
Amathimba Wokuphathwa Kwemikhiqizo aqapha ukuthambekela komkhakha futhi aqinisekise ukuthi isoftware yawo idala i-imeyili ebukeka cishe yiwo wonke amaklayenti e-imeyili.
Amathimba we-Akhawunti Yokuphatha angakusiza ekwakheni i-imeyili, ukubhala ngamakhophi, nezinye izinsizakalo zamasu ukukhulisa izimpendulo.
Amaqembu wokuhlanganisa asebenza nezinkampani emhlabeni wonke kuzinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene nezinkundla. Banikeza isipiliyoni ukuze ukuhlanganiswa kuthuthukiswe kahle okokuqala.
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza okusekela izindinganiso eziphakeme kakhulu zentuthuko futhi kusebenzisa ubuchwepheshe nengqalasizinda kakhulu.
Esinye Isibonelo: Uku-oda nge-Inthanethi
Emkhakheni Wezokudlela, kunabantu abaningi abathengisa isoftware yoku-oda online. Sinama-paradigms afanayo nabantu be-IT ukweqa lokho ama-ASP ajwayelekile anakho, iningi lazo zonke iqembu elinamakhono nelinolwazi lwe-IT elikholelwa ukuthi lingasebenzisa noma iyiphi isoftware emhlabeni. Angingabazi ukuthi bayakwazi - kepha ubuchwepheshe babo buqala futhi bume lapho isoftware iqala futhi iphele khona.
Inkinga ngabathengisi be-Restaurant Industry Online Ordering ukuthi bambalwa babo ababheka ngale kwemboni… baxazulule inkinga yokuthi ungasuka kanjani endaweni ye-A ukhombe B futhi bavala umnyango. Ukuthola i-oda kusuka ku-inthanethi uye ku- pOS yingxenye elula. Uma usungakwenza lokho, 'usebhizinisini'. Izingxenye ezinzima, zilandela noma kunjalo:
Ukuhlaziya ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza, ukuhambisana, ukusebenziseka nokukhulisa i-interface yomsebenzisi ukukhuphula ama-upsell nokunciphisa amazinga okushiya.
Ukuhlinzeka ngokukhuphuka kwama-oda anephutha ngenxa yokuphela, izingqinamba ze-POS, izingqinamba zemenyu, izingqinamba zokuxhuma, izingqinamba zokukhokha, njll. I-oda elilodwa elilahlekile liyinhlekelele ngoba uthola ithuba elilodwa kuphela nomvikeli oku-inthanethi ukulithola kahle.
Ukuqapha ukuthambekela kwemboni ukuhlinzeka ngobuchwepheshe obufanele kanye nezindlela ezihamba phambili zokwamukelwa okusha nokuhambisana nokuphepha kubalulekile. Uku-oda kweselula kuyizindaba ezinkulu embonini njengamanje. Bangaki kini aba-ode i-pizza ngeSMS? Yebo, bengicabanga kanjalo.
Ukuhlanganiswa kwe analytics, izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe, ukukhangisa ngakunye kokukhokha, ukumaketha nge-imeyili namanye amathuluzi wokumaketha kubalulekile kunoma iyiphi ipulatifomu ye-ecommerce. Ingabe 'isoftware' yakho ikwenzela lokhu? Cha. Kepha i-ASP yakho kufanele ibe.
Ama-ASP kudingeka ukuthi athuthukise futhi atshale
Ama-ASP azizungeza ngethalente elihle kakhulu emakethe, futhi akhe izicelo ezisebenzisa ingqalasizinda KANYE nensizakalo yokunikeza imiphumela emihle kakhulu. Ama-ASP ashesha futhi impumelelo yawo ihlobene ngqo nempumelelo yebhizinisi lakho.
Enye inzuzo yokugcina kuma-ASPs, vele, kuyindlela yokukhokhisa isoftware yabo. Ama-ASP ngokuvamile anikela ngemodeli yokubhaliselwe lapho abahlinzeki be-software behlinzeka ngemodeli yokulayisensa. Uyini umehluko? Uthenga isoftware bese uyayisebenzisa. Uma ingasebenzi, ikakhulukazi inhlangano yakho ukuyenza isebenze. Ngikufisela inhlanhla! Ngama-ASP uvame ukusebenzisa isoftware bese ukhokhela ukusetshenziswa kwayo.
Ama-ASP anikeza iKlayenti amandla, hhayi Isicelo
Ngokombono webhizinisi, lokhu kunikeza ibhizinisi amandla amaningi kakhulu kuMhlinzeki Wensiza Yohlelo Lokusebenza kunenkampani yesoftware. Lokhu kuphoqa i-ASP ukuthi itshale kuzo zombili ucwaningo nentuthuko nobuchwepheshe obunobufakazi obugcwele. Inganekwane ene-ASPs ukuthi inenzuzo enkulu. Ngemuva kokusebenza nama-ASP amakhulu kakhulu, ngiyakuqinisekisa ukuthi inzuzo iyafana nemboni yesoftware.
Tags: chad pollittumabhebhanaUmugqa wesikhathi we-Facebookuzobeincwadi yokumaketha engenayoisaackunokudalaizibalo ze-imeyili zeselulai-readytalksalesforce
Ukuthola Okuphrintiwe kusesepholile!